‘हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाबारे नेपालमा जनमतसंग्रह हुनुपर्छ’ : भाजपाका नेता डा. उपाध्याय (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
‘हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाबारे नेपालमा जनमतसंग्रह हुनुपर्छ’ : भाजपाका नेता डा. उपाध्याय (भिडिओसहित)
‘प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ, मोदी फेरि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ’
काठमाडौं, २ भदौ । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता डा. दिनेश उपाध्यायले नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने बताएका छन् । र, यसको लागि जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले जनमतसंग्रह राजनीतिको विषय नभएर जनताको विषय भएको टिप्पणी गरे । राजनीतिमा धर्म हुनुपर्ने तर धर्ममाथि राजनीति गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था राजनीतिक विषयभन्दा अलग विषय भएको बताए । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था, यो राजनीतिभन्दा अलग विषय हो । मलाई लाग्छ, हिन्दूराष्ट्रको विषयमा नेपालमा जनतमतसंग्रह हुनुपर्छ । तर, यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । ’
उनले आफू भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएको बताए । उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेकोले आगामी दिनमा पनि दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध हुने दाबी गरे ।
उनले भने,‘नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा सम्बन्ध छ । हामीबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ । धर्मकोबारेमा राजनीति हुनुहुँदैन् । भारतमा राम मन्दिरको निर्माण भैरहेको छ । राम मन्दिर सरकारको विषय होईन । राम मन्दिर आस्थाको विषय हो । भगवान पशुपतिपनि आस्था हो । नेपालमा सनातन धर्म हुनुपर्छ ।’